၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် Puerto Rico - Afrikhepri Fondation တွင်ပုန်ကန်ရန်စီစဉ်ထားသောကျွန် Marcos Xiorro
MXiorro arcos သည် ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် Puerto Rico ရှိသကြားစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်များနှင့်စပိန်ကိုလိုနီအစိုးရတို့အားကျွန်ပုန်ကန်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ထိုကြံစည်မှုသည်ပင်သူလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျမပြနိုင်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်များကြားတွင်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီး Puerto Rican သမိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မားကို့စ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ကိုအတိအကျမသိရသေးပါ၊ သူသည်မည်သည့်အာဖရိကဒေသတွင်သူအဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာသူသည်စပိန်လူမျိုးမှအာဖရိကမှခေါ်ဆောင်သွားပြီးဗစ်ဆန်အန်ဒီယိုကိုဝတ်ပြုခဲ့သည်။ သကြားစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်။
Puerto Rico, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဒါဇင်ကျေးကျွန်စပိန် colon ဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်တိုက်ကိုစစ်တိုက်သောအခါ 1527 အတွက်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်ကျေးကျွန်၏ပထမဦးဆုံးပုန်ကန်မှု၌တည်၏။ အဆိုပါပုန်ကန်မှုပျက်ကွက်နှင့်ကျေးကျွန်သူတို့ Taino (ကျွန်းဇာတိကလူ) နဲ့အတူတကွနေထိုင်သစ်အယ်သီးအသိုင်းအဝိုင်းဖွဲ့စည်းရန်တောင်ပေါ်မှလွတ်မြောက်ရန်နိုင်ခဲ့သည်။ ဟာအီတီတော်လှန်ရေးပြီးနောက်ရိုက်နှက်ခဲ့သောပြင်သစ်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံထွက်ပြေးပြီးတော့ Puerto Rico ထံသို့ ဝင်. , သူတို့အခြေချဘယ်မှာနှင့်ကျွန်းအကြီးမားဆုံးသကြားတင်ပို့သူတစ်ဦးကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ 1873 ဆီသို့, ကျွန်ပြုမှု Puerto Rico အတွက်ဖျက်သိမ်း, နှင့်ပိုင်ရှင်များစုဆောင်းစည်းစိမ်များအများစုကျေးကျွန်များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ နှင့် ပို. ပို. အုံကြွမှုများနှင့်မနာခံမှုဖျက်သိမ်းရေးနေသော်လည်းတူညီသောလမ်းနေထိုင်ခြင်း၏ပင်ပန်းခဲ့ကြသူအကျွန်တို့တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအမှတပါး, ဟာအီတီတော်လှန်ရေး (1791 - 1804) ၏အောင်မြင်မှုသည်နောက်, ကောလာဟလတီစပိန်ကိုလိုနီတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြသည်ကာရစ်ဘီယံကနေဖြန့်ရပြီ။ ဤရွေ့ကားကောလာဟလများသည်အလွန်ကြောက်စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်တွေသူတို့ပြီးသားဟေတီကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသိမြင်ရကြ၏။
ဇူလိုင်လ 1821 ခုနှစ်, Xiorro ကွဲပြားခြားနားသောစိုက်ခင်းကနေအများအပြားကျေးကျွန်အတူပုန်ကန်စီစဉ်ဖို့အခွအေန၏အားသာချက်ယူချင်တယ်။ သူသည်မာရီယိုနှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများက Narciso Bayamon နှင့် Toa ဘာဟာအတွက်ကျွန်ပုန်ကန်မှုဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ပြင်ဆင်နေ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုမြို့မီးရှို့အနက်ရောင်မဟုတ်ကြသူအပေါင်းတို့ကိုသတ်ပြီးတော့, Bayamon hijack ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့နောက်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လက်နက်ကိုင်များနှင့်အဆင်သင့်ရီယို Pedras, Guaynabo နှင့် Palo Seco တူသောအခြားမြို့များ၏ကျေးကျွန်နှင့်အတူစည်းလုံးရန်ရည်ရွယ်, သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲပြီးနောက်, သူတို့က San Juan ၏မြို့တော်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ပေါ်တို၏ Xiorro ရှငျဘုရငျကိုကြေညာ ရီ။ ကံမကောင်းစွာ Xiorro အဘို့, Miguel Figueres အမည်ရှိစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်အစီအစဉ် Xiorro နှင့်သူ၏ရဲဘော်ရဲဘက်များကြိုတင်မဲအတွက်သူ့ကိုပြောပြသည်ခဲ့သော Ambroso အမည်ရှိကျွန် "သစ္စာစောင့်သိ" အိမ်တအိမ် negro ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွတ်ကီးအကျိုးကိုခဲ့ကိုမဆိုကြံစည်မှုပုန်ကန်ရှုတ်ချတဲ့သူမဆိုကျွန်လွတ်လပ်မှုနှင့် $ 500 ပီဆိုနှင့်အတူဆုခခြံခဲ့သညျ။ Figueres ပြီးတော့စစ်သား 500 ကိုစေလွှတ်ထားတဲ့ Bayamon ၏မြို့တော်ဝန်, အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏ Xiorro နှင့်သူ၏ရဲဘော်ရဲဘက်သူတို့ကိုကမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းဖမ်းမိခဲ့သည်ခေါင်းဆောင်များ။ 61 ကျေးကျွန်တစ်ဦးစုစုပေါင်း Bayamon နှင့် San Juan အတွက်အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါသြဂုတ်လ 15 1821, Xiorro နှင့်မိတ်ဆွေများ, အခြို့ကွပ်မျက်ခံရခဲ့ကြသည်ရုံထောင်ချခံရကျွန်းနှင့်အခြားသူများထံမှပြည်နှင်ဒဏ်ပေးအခြားသူတွေကြိုးစားခဲ့ပြီ။ Xiorro သီးခြားစီကြိုးစားခဲ့နှင့်သူ၏ကံကြမ္မာကိုမသိရဖြစ်နေဆဲခဲ့သည်။
အဆိုပါပုန်ကန်ပြီးနောက်အတော်ကြာပုန်ကန်ရှိခဲ့သည်အခြားကျေးကျွန်ပင်အယ်လ် Grito က de လာရီ, စပိန်ဆန့်ကျင် Puerto Rico ၏လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပုန်ကန်ပါဝင်ခဲ့။
2007 များတွင်တဦးတည်းခွင့်အယ်လ် Cimmaron ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ရို Telemaco မားကို့စ Xiorro သရုပ်ဆောင်နှင့်အတူ (ပုံထဲမှာပြသ) ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
အစာရှောင်ခြင်း - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2017)
Watch Simply Black (၂၀၂၀)
လူ့သဘောသဘာဝ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2019)